जाडोमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ? - bampijhyala.com
Home > शिक्षा/ स्वास्थ्य > जाडोमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ?
२३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १०:२१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । जाडो सुरु भएसँगै छाला सुक्खा हुन थाल्छ । चिसोमा छाला रातो हुने, फुट्ने, खस्रो हुनेलगायत छालासम्बन्धी समस्या देखिन्छ । विशेषगरी संवेनदशील छाला भएकालाई यस्तो समस्याले झनै सताउँछ । जाडोमा यस्ता छालासम्बन्धी समस्याबाट जोगिन विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
जाडोमा छाला सुख्खा हुनेबित्तिकै धेरैजसोले जे पायो त्यही क्रिम दल्छन् । त्यसो गर्नाले छालाको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बढेर जान्छ । कतिपयलाई छालाको एलर्जीसमेत हुन्छ । त्यसैले जाडोमा म्वइस्चराइजर छनोट गर्दा निकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । सबैको छाला एकै किसिमको नहुने भएको आफ्नो छालाअनुसारको म्वइस्चराइजर छनोट गर्नुपर्छ ।
जाडोमा धेरैले सनस्क्रिन प्रयोग गर्दैनन् । तर, जाडो होस् वा गर्मी छालाको सुरक्षाको लागि अनिवार्य रुपमा सनस्क्रिनको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले छालालाई सूर्यको किरणबाट बचाउँछ ।
हात धुँदा प्रयोग गर्ने साबुन पनि नरम खालको प्रयोग गर्नुपर्छ । जाडोमा सकेसम्म एन्टी–ब्याक्टेरियल साबुन प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो साबुन कठोर हुन्छ, जसले हात सुख्खा बनाउँछ र फुटाउँछ । त्यसैले जाडोमा सकेसम्म म्वइस्चराइजरयुक्त साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले हातलाई नरम बनाउँछ ।
जाडो महिनामा हातको छाला जोगाउन पञ्जा लगाउनुपर्छ । विशेषगरी स्कुटर वा बाइक चालकले हातको छाला सुक्खा हुनबाट जोगाउन अनिवार्य रुपामा पञ्जा लगाउनु पर्छ । यसो गर्नाले चिसो हावाले छालालाई हानी पुर्‍याउन पाउँदैन ।
जाडोमा चिसो हुन्छ भनेर धेरैजना पानी पिउन अन्कनाउँछन् । तर, छालाको स्वास्थ्यको ध्यान दिनेले प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । जाडो होस् वा गर्मी महिना छाला स्वस्थ र चम्किलो राख्नका लागि पानीले निकै ठूलो सहयोग गर्छ ।
त्यस्तै, जाडो महिनामा धेरैको तातो पानीले नुहाउने बानी हुन्छ । यो गलत बानी हो । जाडो महिनामा धेरै तातो वा चिसो पानीले नुहाउँदा छालालाई असर गर्छ । जाडो महिनामा जहिल्यै मनतातो पानीले नुहाउनुपर्छ । नुहाएपछि हल्का भिजेको शरीरमा नरिवलको तेल वा लोसन लगाउनु पर्छ । यसले पनि शरीरलाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ । कसैको निकै सुख्खा छाला छ भने नुहाउने पानीमा नुन राखेर नुहाउँदा पनि छाला सुख्खा हुन पाउँदैन ।
अव शिक्षकहरुको लागि छुट्टै अस्पताल
सात वर्षीया मनिषा सुनारको घाँटी रेटेर हत्या
२६ पुष २०७८, सोमबार १५:०१ bampijhyala 0
पुस २६ , काठमाडौँ । सरकारले पुस २७ गतेदेखि...
२६ पुष २०७८, सोमबार ११:२६ bampijhyala 0
काठमाडौं,पुस २६ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले...
१९ पुष २०७८, सोमबार १३:०३ bampijhyala 0
उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा चिसो अत्यधिक बढ्दै गएपछि सामुदायिक...
शिक्षा/ स्वास्थ्य समाचार
माओवादी पदाधिकारीको निर्वाचन माघ २७ मा गदै २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १०:२१
दोलखामा थप ४७ जनामा कोरोना पुष्टि २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १०:२१
सरकार समयमै तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न तयार : सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १०:२१
प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री रेणु यादवको जनकपुरमा पुतला दहन २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १०:२१
माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई माघ महिनाभित्रै पूर्णता दिने २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १०:२१